विद्युत् डिमाण्ड शुल्क छूट सोमवारदेखि कार्यान्वयन हुने
काठमाडौं । कोभिड–१९ का कारण प्रभावित उत्पादनमूलक उद्योगलाई बन्दाबन्दी अवधिभरको विद्युत् डिमाण्ड शुल्क छूट सोमवारदेखि कार्यान्वयन हुने भएको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा अर्थ मन्त्रालयमा बसेको बैठकले माघ ५ गतेदेखि उक्त छूट कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निर्णय कार्यान्वयनबाट उद्योगहरू लाभान्वित हुने र कोभिडबाट प्रभावित अर्थतन्त्र पुनरुत्थानमा थप सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
बैठकमा औद्योगिक व्यवसाय नियमावली, २०७६ मा उल्लिखित ५८ प्रकारका उद्योगलाई आधार मानेर छूट दिने सहमति भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा कोभिड–१९ का कारण प्रभावित उत्पादनमूलक उद्योगलाई बन्दाबन्दी अवधिभर विद्युत् डिमाण्ड शुल्क छूट दिने र माग कम हुने समयको विद्युत् खपतमा ५० प्रतिशत छूट दिने उल्लेख गरिएको थियो ।
बैठकमा राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनी, उद्योग मन्त्रालयका सचिव डा. वैकुण्ठ अर्याल, ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव दिनेश घिमिरे, अर्थमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कामु कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य र उद्योग विभागका महानिर्देशक जीवलाल भुसाल सहभागी थिए ।
प्रभु क्यापिटलको ‘ट्रिपल नाइन ! ट्रिपल बेनिफिट डिम्याट योजना’ सञ्चालनमा[२०७७ फागुन, १६]
८ ओटा नयाँ म्युचुअल फण्ड सञ्चालनमा आउँदै, ७६ करोड इकाई पाइपलाइनमा[२०७७ फागुन, १६]
बैंक अफ काठमाण्डूको विशेष साधारण सभा चैत ३ गते[२०७७ फागुन, १६]
सनराइज बैंकका ग्राहकलाई ग्रीन भ्याली रिसोर्ट शिवपुरीमा छूट[२०७७ फागुन, १६]
नेपाल खोप अभियान नयाँ चरणमा प्रवेश गर्दै छ : स्वास्थ्यमन्त्री [२०७७ फागुन, १६]
एयरबस कम्पनीसँग अनुमति लिएरै जहाज उडाएका हौं : वायुसेवा निगम [२०७७ फागुन, १६]
केरुङ नाका सोमवारदेखि पुन : सञ्चालन हुँदै [२०७७ फागुन, १६]
जग्गाधनी पुर्जा दिनेगरी प्रक्रिया शुरू
सेतो मच्छिन्द्रनाथ मन्दिरको पुनर्निर्माण शुरू
विधेयक अधिवेशन खेर नजाओस्
आर्थिक पत्रकारिता तालिम